“လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ တန်းတူခွင့်ရမယ် ဒီမိုကရေစီရှိမယ် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ခွဲထွက်မှာ မဟုတ်ဘူး” နိုင်ဟံသာ ( ဥက္ကဌ - မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ) » Myanmar Peace Monitor
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့အလားအလာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌ နိုင်ဟံသာအား မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အယ်ဒီတာ လည်းဖြစ် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့(Myanmar Peace Monitor – BNI) ရဲ့ မြေပြင်သတင်းစာဆရာလည်း ဖြစ်တဲ့ ဗညားအောင်က မွန်ဘာသာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကို အနီးစပ်ဆုံး မြန်မာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- ကနဦး ကျနော် မေးချင်တာက တစ်နှခွဲကြာ တစ်ဆို့ရပ်တန့်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စပါ။ မကြာသေးခင် ၈ ကြိမ်မြောက် JICM အစည်းအဝေး ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ပေါ် ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အကောင်းဘက်က ဘာရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သလဲဆရာ။
ဖြေ- (၂၁) ရာစုပင်လုံ(တတိယအစည်းအဝေး) ပြီးချိန် ၂၀၁၈ နှစ်လယ်ကစပြီး ကျနော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘဲ ရပ်တန့်ခဲ့တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့အနေအထားမှာတော့ အစိုးရဘက်ကနေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရှေ့ဆက်ပြန်သွားလိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကို ကျနော်တို့မြင်တွေ့လာရတယ်၊ ကျနော်တို့ တိုင်ရင်းသားလက်ကိုင်အင်အားစုတွေကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်အောင်မြင်စေချင်တဲ့ဆန္ဒက ရှိပြီးသားပါ။ ကြိုးလည်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တာပဲလေ။
နှစ်ဖက်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် ၁၀ ဦးစီ တွေ့ဆုံပြီးနည်းလမ်းရှာကြံ ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတာလည်း လမ်းစမပေါ်ခဲ့ပါဘူး၊ အခုပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းပြီး ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြန်လုပ်နိုင်တော့ ၂၀၂၀ ပထမလေးလပိုင်းမှာ ၂၁ ရာစုပင်လုံ စတုတ္ထအစည်းအဝေး ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ။ အစိုးရဘက်ကရော ကျနော်တို့ NCA-S EAO ဘက်ကပါ နှစ်ဖက်စလုံးက ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေကြတယ်။
နှစ်ဖက်စလုံး လက်နက်ကိုင်ပြီးဖြေရှင်းတဲ့နည်းက ဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူတို့(အစိုးရ) ရော ကျနော်တို့ပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောပေါက်ပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့ ခုဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးက ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ၄ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား(၂၈-၁၀-၂၀၁၉) မှာ ကျနော်တို့အစ်မ အောင်ဆန်းစုကြည်
ပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေအတိုင်းဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ သူ့မိန့်ခွန်း(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) ကို ကျနော်အနည်းအကျဉ်း ကောက်နုတ်ပြောလိုပါတယ်။
သူ့မိန့်ခွန်းက “ကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်တာဝန်စပြီး ထမ်းဆောင်ကတည်းက ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကို လျှောက်လှမ်းဖို့ ကတိပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်” အဲဒီတစ်ချက်ရယ်၊ နောက်တစ်ချက်က “စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်မှ ကျမတို့နိုင်ငံ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုတာ အရင်ကတည်းက ကျမတို့တဖွဖွပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့အညီ အာဏာခွဲဝေမှုတွေရှိရမယ်၊ သယံဇာတခွဲဝေမှုနဲ့ အခွန်အကောက်ခွဲဝေမှုတွေ ရှိရမယ်၊ ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အားလုံးဟာ တန်းတူရည်တူရှိရမယ်၊ ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အာမခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခြေခံဥပဒေတွေရှိရမယ်” လို့ အခုလို ဖက်ဒရယ်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) ဖွင့်ဆိုသွားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အရင့်အရင်ကဆိုရင် ဒီလိုဖွင့်ဆိုပြောခဲ့တာ မကြားမိပါဘူး။ အစိုးရဘက်ကရော တပ်ဘက်ကပါ ဘာမှမပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်ပဲနေခဲ့ကြတာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်ဖို့ အခုလိုမသွားရင် မဖြစ်တော့မှန်းသိလာပြီး အခုလိုဖွင့်ပြောလာတဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမြင်က ပိုမိုနီးစပ်မှုရှိလာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
သူ့(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) မိန့်ခွန်းမှာ နောက်ထပ် မှတ်သားစရာတွေရှိပါသေးတယ်၊ “တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးကို အခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မတည်ဆောက်နိုင်သ၍ ကျမတို့နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းဖို့မမြင်နိုင်ပါဘူး” အဲဒီလို သူ(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) လက်ခံထားတယ်။ “ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ကိုအခြေခံတဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်သ၍ ကျမတို့နိုင်ငံ တိုးတက်အားကောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” မူလပင်လုံကို အခြေခံပြီးပြောသွားတာ၊ “ ဒီအနေအထားကို နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ ကျမတို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကျမတို့အားလုံး စိတ်တူကိုယ်တူကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါဘူး”
အားလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေသူ ပါတီကြီးတစ်ရပ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေနဲ့ အခုလိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ရပ်တည်ပြောဆိုလာတာဟာ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အမြင်ချင်းလည်း နီးစပ်လာသလို ပိတ်နေတဲ့တံခါးတွေလည်း ပွင့်လာပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လာမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရလဒ်ဘယ်လိုထွက်လာမလည်းဆိုတာကိုတော့ အတတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ တပ်မတော် သဘောထား ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာ မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်ဘက်က ကျနော်တို့နဲ့အမြင်ချင်းနီးစပ်လာတဲ့အပေါ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလားအလာကောင်းပဲလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။
နောက် ကမ်ဘီယာနိုင်ငံစွဲဆိုခဲ့တဲ့အပေါ် ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ကျနော်တို့ဘက်က လွန်ကျူးခဲ့တာကိုလည်း ထောက်ပြထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် လက်ရှိကျနော်တို့နိုင်ငံအနေအထားအရ ပြောင်းလဲမှုမပြုလုပ်နိုင်ရင်တော့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေလည်း အမျိုးမျိုးသက်ရောက်လာနိုင်တယ်၊ ဒါကို ထိပ်ပိုင်းက အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ နားလည်ပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အစိုးရ၊ တပ်မတော်ဘက်က သဘောထားအမြင်တွေ Mindset တွေ အနည်းနဲ့အများတော့ ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ မြင်မိတယ်။
ခုနက အချက် ၂ ချက်အပေါ်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့ အလားအလာကောင်းတွေ မြင်နေရတယ်လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်၊ လာမယ့် မကြာခင် ရက်ပိုင်းတွေမှာလည်း ကျနော်တို့ NCA-S EAO နဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေ ထပ်မံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပါဦးမယ်၊ လာမည့်ဧပြီလထဲမှာ ၂၁ ရာစုပင်လုံစတုတ္ထအစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအဖြေကိုတော့ အသေအချာ တပ်အပ်တော့ မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်၊ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာနိုင်သလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ အခက်အခဲတွေ တစ်ဆို့မှုတွေ ရှိချင်လည်း ရှိလာနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲပြောပြော ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး- သျှမ်းနဲ့ ရခိုင်တို့အနေနဲ့ လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ မကျင်းပနိုင်ဘဲနဲ့ အခု ၂၁ ရာစုပင်လုံကို ကျင်းပတာ အဆင်ပြေနိုင်သလား?
ဖြေ- အလွတ်သဘောဆွေးနွေးမှုတွေအရ သျှမ်းနဲ့ ရခိုင်တို့ကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ခွင့်ပြုမယ်လို့တော့ သိထားတယ်၊ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က လက်ခံထားတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဒါကလည်း ကောင်းတဲ့အလားအလာပါပဲ။
မေး-ဟုတ်ကဲ့ ဒါတွေက အကောင်းဘက်ကိုကြည့်ပြီး သုံးသပ်ရတာပေါ့၊ တဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၁ ပင်လုံမှာလည်း ကြိုးပမ်းသလို ခုဆိုရင် NLD ကဦးဆောင်ပြီး ၄၅ ဦးကော်မတီနဲ့ လွှတ်တော်တွင်းကနေ ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုက အပြိုင်အဆိုင်များ ဖြစ်နေသလား၊ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကော မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလား?
ဖြေ-တကယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ကနေတဆင့် ပြင်ဆင်သွားဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး၊ တပ်မတော်လက်မခံရင် ပြင်လို့မရနိုင်ပါဘူး၊ ဒါက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြဌာန်းချက်အတိုင်းဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံလမ်းကြောင်းကနေ သွားနေတာဖြစ်တယ်။ ညီလာခံကနေဆုံးဖြတ်ရင် လွှတ်တော်ကနေအတည်ပြုပေးရမယ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ၂၁ ပင်လုံ ညီလာခံကနေ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းက ပိုပြီးအဆင်ချောလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့မြင်တယ်။
နောက်တစ်ချက်က NLD ပါတီအနေနဲ့ လူထုကိုပေးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိတွေမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မယ်လို့ ပြောထားပြီး ဘာမှအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးဘူး၊ တဖက်ကလည်း ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကလည်း ရပ်တန့်သွားတော့ လွှတ်တော်ကနေ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစား ရတာပေါ့၊ ပေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိအတိုင်း လုပ်ပြတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီးအရာရောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့မထင်ဘူး၊ တပ်မတော်ဘက်က ဆက်ပြီးကာကွယ်နေရင် ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ နောက်တစ်ချက် NLD အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အမှန်တကယ်ပြင်ဆင်လိုတယ် ကြိုးပမ်းနေတယ် လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာ ရှင်းလင်းမြင်သာအောင်ပြသတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အောင်မြင်တာ မအောင်မြင်တာ တစ်ပိုင်းပေါ့။ ဒါပေမယ့် လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ ၂၁ ပင်လုံကနေ ပြင်ဆင်သွားရင်တော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅% လည်း ကန့်ကွက်စရာမရှိတော့ပါဘူး အလိုလိုသဘောတူပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒါကိုတမျိုးချုပ်ပြီး ပြောရရင် NLD အနေနဲ့ ၂၁ ပင်လုံနဲ့အပြိုင် ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ၂၁ ပင်လုံလမ်းကြောင်း ရပ်တန့်သွားလို့သာ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြိုးစားပြီး ပြင်ဆင်နေတာလို့ မြင်တယ်။
မေး- လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင် တပ်မတော်အပါအဝင် အစိုးရနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအုပ်စုတွေပဲ အဓိကဦးဆောင်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ပြည်သူတွေ ကျန်တဲ့အင်အားစုတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်အောင် ဆရာ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုအကြံပြုလိုပါသလဲ?
ဖြေ- ဒီလိုပါ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ပြည်တွင်းစစ်မှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်နေကြတာက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ အစိုးရ၊ တပ်မတော်က အဓိကကျပါတယ်။ ဒီအင်အားစု ၂ ခုသာ နားလည်မှုရသွားကြရင် အစစအရာရာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပါလိမ့်မယ်၊ လက်ရှိ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့နဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာဖို့က ဒီအင်အားစု ၂ ခုအပေါ်မှာပဲ အဓိကမူတည်နေတယ်။ အခုဆိုရင် ဒီအင်အားစု ၂ ခုက အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးနေကြပါပြီ။ ဒီအင်အားစု ၂ စုသာ နားလည်မှုရကြပြီး သဘောတူညီမှုတွေရရင်တော့ ခုနကကျန်တဲ့အင်အားစုတွေလည်း ဝန်းရံလိုက်ပါရမှာပါ။ ဆိုလိုတာက ဒီအင်အားစု ၂ ခု မပြေလည်သေးသ၍ ကျန်တဲ့အင်အားစုတွေ ဝန်းရံပြီးပါဝင်လိုက်ပါလာဖို့ဆိုတာ အခြေအနေမပေးသေးပါဘူး။
မေး-မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၇ ဖွဲ့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်လာဖို့ရှိလား၊ နောက်ဆုံးအခြေအနေလေး သိပါရစေ?
ဖြေ- ကျနော်တို့သိထားရသလောက်ပြောမယ်ဆိုရင် အဓိကဖြစ်တဲ့ ကချင် KIO နဲ့ စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင် AA, ပလောင် TNLA၊ ကိုးကန့် MNDAA တို့လည်း အစိုးရနဲ့ အလွတ်သဘောဆွေးနွေးနေပါတယ်၊ အဲဒီကတဆင့် အပစ်ရပ်စဲရေးလုပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်လာဖို့ပါ၊
တဖက်မှာ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ကိစ္စက အတော်ကြာနေပါပြီ။ သူတို့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားတောင့်တနေကြပြီး စားပွဲပေါ်တွေ့ဆုံဖြေရှင်းလိုတဲ့ ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုပြင်းထန်လာတယ်၊ လူထုတော်တော်များကလည်း စစ်ဘေးဒဏ်သင့်ရတယ်၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေလည်း မနည်းတော့ဘူး၊ ရခိုင်စစ်ပွဲမှာ အစိုးရအနေနဲ့ AA ရေရှည်မရပ်တည်နိုင်အောင် တိုက်ထုတ်ပစ်မယ် တိုက်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆခဲ့ပုံပေါ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မလွယ်ပါဘူး၊ လက်ရှိမှာ အစိုးရဘက်က တော်တော်လေးအထိနာနေတယ်၊ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းအားဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပိုပြီး နားလည်သဘောပေါက်လာကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတာပါ၊ ဒါပေမယ့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေက NCA ကို လက်မခံဘူးနော်၊ NCA မှာ သူတို့လက်ခံနိုင်လောက်စရာမရှိတဲ့ အချက်တစ်ချို့ပါဝင်နေလို့ပါ။
ထားလိုက်ပါ၊ သူတို့ NCA လက်မှတ်မထိုးသည့်တိုင်အောင် အပစ်ရပ်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းမှာပါဝင်လာအောင် မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေက ကြိုးပမ်းနေတယ်၊ ဖြစ်လာရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။
မေး- ၂၁ ရာစုပင်လုံ စတုတ္ထအစည်းအဝေးမတိုင်ခင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ညီလာခံတစ်ခုကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့ ကြားမိတယ်၊ အဲဒါ ဘယ်လိုညီလာခံမျိုးလဲ?
ဖြေ- တိုင်းရင်းသားညီလာခံ ကျင်းပဖြစ်မယ်လို့တော့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ ၇ ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ Task Force ကနေ ဦးစီးကျင်းပဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကတည်းက ရည်မှန်းထားတာ ရှိတယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့တွေနဲ့ ၇ ပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက အဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တည်ဆောက်ကြမလဲ ဆိုတာကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံး အမြင်သဘောထားတစ်ခုတည်း ရှိနေပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုရင် အစိုးရနဲ့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အဆင်ချောလိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်ကြပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူတစ်ခုကိုရေးဆွဲနေတယ်၊ ပြီးခါနီးပါပြီ၊ ပြီးတဲ့အခါမှာ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ သုံးသပ်အတည်ပြုလို့ပြီးရင်တော့ ညီလာခံတစ်ခု ခေါ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာ ရှိတယ်။
ဆိုလိုတာ ဘယ်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအခြေခံမူအပေါ် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြုထားလို့ရှိရင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆိုမှုတွေ ပိုမိုထိရောက်လိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေမှာ အမြင်အမျိုမျိုးကွဲပြားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်အစိုးရနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တပ်မတော်နဲ့ပဲဆိုဆို ဆွေးနွေးပြောဆိုတဲ့အခါ အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံး တစ်ခုတည်းသောရပ်တည်ချက် အမြင်သဘောထားတွေရှိဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်းနေရတာပါ။
မေး-လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်မမေးမြန်းဖြစ်တဲ့မေးခွန်း ဒါမှမဟုတ် ဆရာဖြည့်စွက်ပြောလိုတာများရှိရင် ပြောပေးပါခင်ဗျာ-
ဖြေ- လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးကိစ်စရပ်တွေမှာဆိုရင် အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲက တပ်မတော်ရပ်တည်ချက်ပါပဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ၄ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာ တပ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်သင်ခန်းစာအရပ်ရပ်ကို ထောက်ရှုပြီး တပ်မတော်အနေနဲ့ သူတို့သဘောထား ၆ ချက်အတိုင်း ရပ်တည်ထားလျက်ပါပဲ၊ အဲဒီမူ ၆ ချက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲပဲ၊ ဒါက ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲပါပဲ၊ ခွဲမထွက်ရဆိုတာကိုလည်း ဆက်ပြီးပြောဆိုနေတယ်၊ တပ်မတော်ရပ်တည်ချက်က အပြောင်းအလဲမရှိပါဘူး၊ တပ်မတော်အနေနဲ့ ဒီ ၆ ချက်ကိုပဲ ဆက်ပြီးတင်းခံနေမယ်ဆိုရင် တစ်ဆို့မှုတွေ ဆက်ပြီးရှိနေဦးမှာပါ။ တပ်မတော်ရော ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရော သူဘက်ကိုယ့်ဘက်အာမခံချက်ရှိရှိနဲ့ ဒီပြည်ထောင်စုကြီးမှာ အတူတကွဆက်လက်ရှင်သန် နေထိုင်သွားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ကျနော်တို့မှာ အမြဲတမ်းစဉ်းစားပါတယ်။ ခဏခဏလည်း ကျနော်သူတို့ကို ပြောဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးရှိနေမှသာ လုံလုံခြုံခြုံနေနိုင်ကြမှာပါ။ ပထဝီအရ မွန်နဲ့ရခိုင်ပဲ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိပါတယ်။ ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေက တောင်ပေါ်၊ ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသဖြစ်နေပါတယ်၊ နေရာဒေသကျဉ်းကျဉ်းလေးက တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးကနေခွဲထွက်သွားရင် အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုကြီးတွေနဲ့ကြုံရမှာပါ။ ပထဝီအရ လုံးဝခွဲထွက်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် NCA ပြဌာန်းချက်ပါအတိုင်း လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ တန်းတူခွင့်ရမယ် ဒီမိုကရေစီရှိမယ် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှလည်း ခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။